Iindidi ezili-13 zeMikhankaso ye-imeyile ebangelwe ekufuneka uyiphumezile | Martech Zone
Iindidi ezili-13 zemikhankaso ye-imeyile ekufuneka uyenzile
NgoLwesibini, Oktobha 19, 2021 NgoLwesithathu, Oktobha 20, 2021 Douglas Karr
Ngokusebenza nabathengisi be-imeyile abaliqela, bendihlala ndimangalisiwe kukusilela koyiliweyo, olusebenzayo kubangelwe imikhankaso ye-imeyile ngaphakathi kweeakhawunti ekuphunyezweni. Ukuba uliqonga lokufunda oku-kuya kufuneka ukuba ube namaphulo alungele ukuya kwinkqubo yakho. Ukuba ungumthengisi we-imeyile, kuya kufuneka ukuba usebenze ukubandakanya iintlobo ezininzi zee-imeyile ezinokubangela ukuba wandise ukubandakanyeka, ukufunyanwa, ukugcinwa kunye namathuba e-upsell.
Abathengisi abangasebenzisi imikhankaso ye-imeyile ebangeleyo ngoku baphoswa kakhulu. Ngelixa i-imeyile ebangelwe ikhula ekwamkelweni, uninzi lwabathengisi abaluthathi eli cebo lilula.
I-imeyile ebangelwe zii-imeyile eziqaliswe kukuziphatha komrhumi, iprofayile, okanye ukhetho. Oku kwahlukile kwimikhankaso yemiyalezo emininzi, eyenziwayo ngexesha elimiselwe kwangaphambili okanye ixesha ngophawu.
Kungenxa yokuba imikhankaso ye-imeyile ebangele ukuba ijolise ekuziphatheni kwaye ibekelwe ixesha xa umntu obhalisileyo ebalindele, bafumana iziphumo eziphezulu xa kuthelekiswa neshishini njengemikhankaso yesiqhelo ye-imeyile njengeeleta zeendaba. Ngoku ka Iingxelo zeBlueshift Benchmark Kwintengiso ye-imeyile ebangelwe:
Ngokomndilili, ii-imeyile ezibangelwa zezi 497% isebenza ngakumbi kunee-imeyile zokuqhushumba. Oku kuqhutywa ngu 468% inqanaba lokucofa eliphezulu, kunye a 525% inqanaba eliphezulu lokuguqula.
Ngokomndilili, imikhankaso ye-imeyile esebenzisa ixesha lokuzibandakanya 157% isebenze ngakumbi kunexesha lokungazibandakanyi ii-imeyile ezilungiselelwe. Oku kuqhutywa ngu 81% inqanaba lokucofa eliphezulu, kunye a 234% inqanaba eliphezulu lokuguqula.
Ngokomndilili, imikhankaso ye-imeyile esebenzisa iingcebiso zezi 116% isebenze ngakumbi kunemikhankaso yebhetshi ngaphandle kwengcebiso. Oku kuqhutywa ngu 22% inqanaba lokucofa eliphezulu, kunye a 209% inqanaba eliphezulu lokuguqula.
I-Blueshift ihlalutye imiyalezo eyi-14.9 yezigidigidi kwi-imeyile kunye nakwizaziso zeselfowuni ezithunyelwe ngabathengi beBlueshift. Bahlalutye le datha ukuze baqonde umahluko kwiimetwork zokuzibandakanya eziphambili kubandakanya ukucofa amaxabiso kunye namaqondo okuguqula phakathi kweentlobo ezahlukeneyo zonxibelelwano. Idathaset yedatha yabo imele ngaphezulu kwe-12 yeefektri ezibandakanya i-eCommerce, ezezimali zabaThengi, ezeMpilo, ezeMidiya, ezeMfundo, kunye nokunye.
Ukubuyisela kwakhona i-imeyile Ukuthumela isaziso kumthengi xa uluhlu lweempahla lubuyile kwisitokhwe yeyona ndlela ilungileyo yokukhulisa ukuguqulwa kwaye ubuyisele umthengi kwindawo yakho.
I-imeyile yokuziphatha -Ukuba umthengi ubandakanyeka ngokwasemzimbeni okanye ngokwamanani ngophawu lwakho, ukufunxa umyalezo we-imeyile owenzelwe wena kunye nonokunceda ukukhawulezisa uhambo lokuthenga. Umzekelo, ukuba umthengi ubrawuza indawo yakho kwaye ushiya… unganqwenela ukubonelela ngemveliso yengcebiso ye-imeyile ebonelela ngesithembiso okanye ulwazi olongezelelweyo ukubarhwebesha ukuba babuye.
Uphando lwe-imeyile -Emva kokuba iodolo okanye iprojekthi igqityiwe, ukuthumela i-imeyile ukubuza ukuba yenziwe njani inkampani yakho yindlela elungileyo yokuqokelela ingxelo emangalisayo kwiimveliso zakho, iinkonzo kunye neenkqubo. Oku kunokulandelwa yi-imeyile yokuphonononga apho ucela uphononongo kubathengi bakho ukuba babelane kulawulo kunye nakwiindawo zokuphonononga.
Jonga iNgxelo yeBeneshimark esekwe kuThengiso lweBlueshift